Qaramada Midoobay: Al-Shabaab wali waxay khatar ku tahay Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQaramada Midoobay: Al-Shabaab wali waxay khatar ku tahay Soomaaliya
November 5, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la asaasay sanadkii 2006-dii. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay ayaa ka digaysa in maleeshiyada Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ay wali awoodo in ay qaado weeraro waa-weyn.
Kooxda ku xiran urur weynaha Al-Qaacida ayaa lix weerar ku qaaday huteelada kuyaala caasimada Soomaaliya ee Muqdisho intii u dhaxaysay bishii November 2015-ka ilaa iyo June 2016-ka, sida lagu sheegay warbixin uu arkay warsidaha Puntland Mirror oo shalay oo Jimce ahayd ay soo saareen guddiga kormeerida cunaqabataynta Soomaaliya u qaabilsan QM.
Warbixinta ayaa sheegaysa in xaalada amaanka ee Soomaaliya aysan wali soo hagaagin.
Warbixinta QM ayaa lagu sheegay in dilka ugu yaraan saddex sargaal oo sare oo Al-Shabaab ahaa oo lagu dilay duqayn diyaaradeed ay fashilisay in si xun ay kooxda u tabar yarayso.
Guddiga dabagalka QM ayaa ku dhaleeceeyay dowlada Soomaaliya in ay ku fashilantay mushahaar siinta ciidamada, taasoo keentay in ay ka baxaan deegaano kuyaala koonfurta iyo bartamaha dalka, kadibna u ogolaatay maleeshiyada in ay kusoo noqdaan deegaenadaas.
Al-Shabaab ayaa u dagaalamaysa sidii ay awooda uga tuuri lahayd dowladda Muqdisho. Maleeshiyada iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dagaalamayay tan iyo sanadkii 2006-dii.
Bartamihii sanadkii 2011-ka, Al-Shabaab ayaa dibada looga saaray Muqdisho iyo magaalooyin kale oo waa-weyn oo kuyaala koonfurta Soomaaliya, balse maleeshiyada ayaa wali qaadaysa weeraradeeda dhimashada leh ee ka dhanka ah saraakiisha dowladda iyo shacabka.
August 13, 2017 Mukhtaar Roobow oo is dhiibay